२०७५ पुस १७ गते मङ्गलवारको प्रतीक दैनिक
दोस्रो चरणको काम समयमा हुन्छ –मेयर
प्रस, वीरगंज, १६ पुस/ वीरगंज महानगरमा सञ्चालित मझौला शहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजनाको काम सम्पन्न नहुँदै दोस्रFे चरणको क्ष्Fेत्रीय शहरी विकास परियोजनाको काम शुरू भएको छ । दुई वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने मझौला शहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजनाको काम अहिले चार वर्ष बित्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । कालिका कन्स्ट्रक्शनले जिम्मा पाएको पहिलो योजना नसकिंदै सोही कन्स्ट्रक्शनले क्ष्Fेत्रीय शहरी विकास परियोजनाको काम पाएको छ । मङ्सिर ७ गते नृसिंह माविबाट क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजनाको काम शुरू भएको हो । रु १ अर्ब ९२ करोड २० लाख लागतमा बाइपास, रेलवे, राधेमाई, घण्टाघर, लिंकरोड, पिपरा लिंकरोड, भिस्वा, कविशिरोमणि टोल, आयुर्वेद, तेजारथ टोल, नहर र नेशनल मेडिकल कलेज क्ष्Fेत्र गरी साढे २१ किलोमिटर कालोपत्र सडक र १४ किलोमिटर नाला निर्माण काम शुरू भएको हो । कालिकाले यो परियोजना पनि दुई वर्षमा पूरा गर्ने शर्तमा लिएको छ । कालिकाका प्रबन्ध व्यवस्थापक ठाकुर ढकालले आप्mनो तर्पmबाट परियोजनाको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने बताएका छन् । उनले पहिलो चरणको मझौला शहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजन
वीरगंजमा आजदेखि हर्न निषेध, प्लास्टिकमाथि प्रतिबन्ध
प्रस, वीरगंज, १७ पुस/ वीरगंज महानगरले पुस १७ गतेदेखि हर्न निषेध र प्लास्टिक निषेध अभियान शुरू गर्दैछ । अभियानको लागि मङ्सिर २० गते बसेको महानगरको कार्यपालिकाले शहरमा हर्न र प्लास्टिक निषेध अभियान पुस १७ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय अनुरूप महानगरपालिकाले सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्दै पहिलो चरणमा सचेतना कार्यक्रममार्पmत हर्न निषेध र प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ । महानगरले हर्न निषेध गर्दा एकैपटक जरिवाना नगरी पुस मसान्तसम्म सचेतना कार्यक्रममार्पmत जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने र त्यसपछि कडा कारबाईमा जाने हिजो आयोजित समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममा वडाध्यक्ष्Fहरूले सुझाव दिएका थिए । ३२ वटै वडाका अध्यक्षहरू सहभागी रहेको सो कार्यक्रममा वीरगंजलाई हर्न र प्लास्टिक निषेध शहर बनाउन वडाध्यक्ष्Fहरूको सक्रियता आवश्यक भएको मेयर विजय सरावगीले बताएका थिए । उनले वडाध्यक्ष्F र वडा सदस्यहरूको सक्रियतामा वडास्तरबाट यो अभियानलाई टेवा पुग्ने हुनाले उनीहरूको भूमिका महŒवपूर्ण हुने बताए । यसैगरी महानगरपालिकाले प्याब्सन, एन–प्याब्सन, सामुदायिक विद्यालयका शिक्ष्Fक, विद्यार्थीहरूसँग
उखुको दररेट कायम गर्न माग
प्रस, वीरगंज, १६ पुस/ उखु उत्पादन किसान सङ्घ, पर्साले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामार्पmत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको छ । सङ्घका अध्यक्ष्F असर्फी साहको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा गएका किसानहरूले प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टराईलाई ज्ञापन बुझाएका थिए । उनीहरूले ज्ञापन बुझाउँदै उखुको दररेट कायम गर्ने सम्बन्धमा सरकारले अविलम्ब निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ज्ञापनमा सरकारले मूल्य निर्धारण नगर्दा यस सिजनको उखु खेतमैं थन्किरहेको र मिल मालिकले जबरजस्ती सहमतिविना कारखाना सञ्चालनमा आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ज्ञापनमा २०७४–०७५ को उखुको मूल्य सरकारले प्रतिक्विन्टल रु ५३६.३६ निर्धारण गरेकोमा सोमध्ये रु ६५.२८ सरकारले दिने र बाँकी रु ४७१.२८ मिलले दिने निर्णय गरेकोमा हालसम्म सरकारले दिनुपर्नेमध्ये रु ५.२८ र मिल व्यवस्थापनले दिनुपर्ने रु ५.३६ नदिएको अवस्थामा अहिले फेरि नयाँ मूल्य निर्धारण नै नगरी मिल सञ्चालन हुन लागेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष उखुको मूल्य निर्धारण गरेपछि उखु किसान र मिल सञ्चालकले सो निर्णय मानेर लिने–दिने गर्नुपर्नेमा उ
सिजी कपको उपाधि लोटस एकेडेमीको पोल्टामा
प्रस, परवानीपुर, १६पुस/ सिजी ग्रुपद्वारा सञ्चालित दिल्ली पब्लिक स्कूल वीरगंजले आयोजना गरेको छैठो संस्करण्को सिजी कपको उपाधि लोटस एकेडेमी, सिमराले जितेको छ । चैनपुरस्थित विद्यालयको खेल मैदानमा भएको फाइनल खेलमा १ गोलको विरुद्ध ३ गोल गरी आयोजक दिल्ली पब्लिक स्कूललाई पराजित गर्दै सिजी कपको उपाधि उचालेको हो । फाइनल खेलका म्यान अफ द म्याच लोटसका रोहन तामाङ घोषित भएका थिए । विद्यालयका प्रधानाध्यापक डा.जिएस चौधरीको सभापतित्वमा सम्पन्न पुरस्कार वितरण समारोहमा जिसी ग्रुपको शिक्षा विभागका प्रमुख राजेश शर्मा, पर्सा पूmटबल सङ्घका अध्यक्ष दिवाकरकृष्ण मानन्धर, परवानीपुर गापाका वडा अध्यक्ष गजेन्द्र पटेललगायतको सहभागिता थियो । उपाधि विजेता तथा उपविजेतालाई शिल्ड, मेडल तथा प्रमाण पत्र वितरण गरिएको विद्यालयका लेखा प्रमुख शिवशङ्कर कुशवाहाले बताए ।
प्रकृतिको हरेक वस्तु गतिशील, विकासशील र परिवर्तनशील छ
सुदर्शनराज पाण्डे द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणले प्रकृति, मानव समाज प्राकृतिक हुन् । वर्ग, राज्यसत्ता, पार्टी मानव निर्मित हुन् । प्रकृति समाज, वर्ग, राज्यसत्ता गतिशील र परिवर्तनशील छन् । समाज वर्ग र राज्यलाई बुझ्न र बदल्न सकिन्छ । सबै वस्तुको जन्म प्राकृतिक घटनाहरूको क्रिया–प्रतिक्रियाद्वारा भएको हो । मानव जाति र समाजको विकास पनि प्राकृतिक ढङ्गले भएको हो । पृथ्वीको उत्पत्ति ४–५ अर्ब पहिले भयो भने पृथ्वीमा जीव उत्पत्ति भएको एक अर्ब वर्ष भएको मानिन्छ । जीवबाट मानव उत्पत्ति भएको जम्मा ४० लाख वर्ष भयो । सामन्तवाद १४ सय वर्ष चल्यो भने पूँजीवाद आएको ५ सय वर्ष पुग्दैछ । जतिबेला मानव जाति घुमन्ते जङ्गली युगमा थियो, त्यस बेलासम्म समाजमा धनी, गरीब वर्ग पनि थिएन । वर्गसङ्घर्ष र राज्य पनि थिएन । प्रकृति र समाजका केही प्रFकृतिक नियम छन्, तिनलाई बदल्न सकिंदैन तर केही त्यसका विकसित विशेषताहरू छन्, जसलाई मानवद्वारा बदल्न र रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । ऋतुहरू फेरिन्छन्, मान्छे जन्मेपछि मर्छ यी नियमहरू फेर्न सकिंदैन । मानव–समाजको विकास र समृतिका लागि श्रम (बौद्धिक र शारीरिक) अनिवार्य छ, यसलाई फे
पूर्वतयारी किन गरिंदैन
हामी योजना बनाउँछौं, योजनाका लागि तमाम बाधा विरोधको सामना पनि गर्दछौं, योजना पूरा गर्न प्रतिबद्धपनि हुन्छौं, खाइ–नखाई लगानीपनि जम्मा गर्छौं तर पूर्व तयारी भने गर्दैनौं । कहिले समाचार आउँछ भने फलानो ठाउँमा पुल बनाउन रकम निकासा भयो, ठेकापनि लाग्यो, तर जब ठेकेदार काम गर्न जान्छ, पुलको त नक्शा नै बनेको हुँदैन । नक्शा बनेको पनि छ र काम शुरू भयो भने ठेकेदार पैसा लिएर भाग्छ, विभिन्न अत्तो थापेर काम बन्द गरिदिन्छ, दुई वर्षमा पूरा हुनुपर्ने काम दस वर्षमा पनि सकिन्न । प्रायः के हुन्छ भने पुलको सबै काम भइसकेको हुन्छ तर सरकारले काम पूरा गर्न लाग्नेजति रकम दिएको हुँदैन । यो एक प्रकारको समस्या भयो । अर्को सडक बनाउनु छ । सबै चाँजोपाँजो मिलाइयो, तर सडक विस्तारको क्रममा स्थापित संरचनाहरू हटाउन भत्काउन समय लाग्छ । एउटा पीडित अदालत गइदियो भने योजना नै अधरमा झुन्डिन्छ । सडक बनाउनुपूर्व यदि त्यसलाई फराकिलो पार्नुछ भने त्यस क्रममा कुनकुन किसिमका बाधा अवरोध आइपर्छ, त्यसको निराकरण ठेका लगाउनुपूर्व किन गरिंदैन ? यसको जवाफ कसैसँग हुँदैन । अहिले हुलाकी सडक निर्माणको काम तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । कामको तीव
२०७५ पुस १६ गते सोमवारको प्रतीक दैनिक
विद्युतीय पोल, रूखको कारण हुलाकी सडकको काम प्रभावित
प्रस, सेढवा, १५ पुस/ हुलाकी राजमार्गमा परेको विद्युतीय पोल र रूखहरूको अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन नसक्दा कामले गति लिन सकेको छैन । हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि माटो फिलिङ्गका कामहरू सम्पन्न भएको छ तर ग्रेभेल गर्ने क्रममा सडकमा रहेका विद्युत् पोल र जङ्गल क्षेत्रका रूखहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । हुलाकी राजमार्ग सडक निर्माण भइरहेको जीराभवानी गाउँपालिकाको सेढवादेखि ठोरी गापाको चौतारासम्म एक सयभन्दा बढी विद्युतीय पोल छन् । सो पोल व्यवस्थापनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको पनि लामो समय बितिसक्यो तर पोल सार्ने काम हुन सकेको छैन । सो स्थानमा हुलाकी सडक निर्माणको ठेक्का लिएको कालिका बानिया जेभीको हुलाकी प्रोजेक्ट इन्चार्ज उद्धव न्यौपानेले प्राधिकरणले समयमा काम नगर्दा निर्माण चरणमा समस्या भएको बताए । उनले माटो फिलिङ्ग गरेपछि सडकको उचाइ बढेको र विद्युत्ले सडकमा रहेको पोल नसार्दा सो क्षेत्रमा सञ्चालन हुने ठूला सवारी साधन दुर्घटनामा पर्न सक्ने सम्भावना बढेको बताए । ठोरी गापा–३ रामनगरमा माटो फिलिङ्ग भएर सडकको उचाइ बढेकोले विद्युत्का हाइटेन्सन लाइनमा ठूला सवारी साध
जेलको स्वास्थ्य केन्द्र चल्यो
प्रस, परवानीपुर, १५ पुस/ वीरगंज कारागारममा ५ वर्ष पहिले निर्माण भएको आचार्य तुलसी स्वास्थ्य उपचार केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । वीरगंजका चिकित्सकहरूको टिमले प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उपयोगविहीन बनेको केन्द्रले सेवा दिन थालेको छ । आज एक कार्याक्रमका बीच पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराईले केन्द्रको सेवा शुरू भएको घोषणा गरेका थिए । शनिवार वीरगंज कारागारका ६ जनाको आज ओपिडीमा चेकजाँच गरी औषधि उपचार गरिएको चिकित्सक टोलीका डा. उदयनारायण सिंहले बताए । चिकित्सकहरूको टिममा डा. दिलीप चौरसिया, डा.विवेक यादव, डा.सुशील साह, डा.सञ्जय जैसवाललगायतको टिमले हरेक दिन उपयुक्त पर्ने समयमा दुई घण्टा ओपिडी सञ्चालन गरी १५ दिनमा विशेषज्ञसहितको सेवा शुरू गर्ने लक्ष्य छ । जेलमा कैदीबन्दीको स्वास्थ्य उपचारको लागि एकजना मेडिकल अफिसर, एकजना एचए र एकजना अनमीको दरबन्दी रहँदै आएकोमा अनमीको दरबन्दी गत वर्ष काटिएको थियो । दरबन्दी भए तापनि चिकित्सक सरुवा भएर आउन नमानेपछि जेलमा कैदीबन्दीको उपचार हुन नसकेको हो । उपचारको लागि नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल धाउनुपर्ने बFध्यता थियो ।
पूँजीवाद र शिक्षा
अनन्तकुमार लाल दास नेपालमा पूँजीवादको विकास एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसले शिक्षामाथि गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ । हाम्रो जस्तो विविधताले भरिएको सामाजिक आवश्यकताको पूर्ति पूँजीवादले मात्र पूरा गर्न सक्दैन तर आवश्यकताको पूर्ति हामी जसरी गरिरहेका छौं त्यसमा पूँजीवादको प्रभाव देखापरिरहेको छ । उदाहरणको लागि एउटा खास प्रकारको राष्ट्रवाद तयार हुनु । वर्तमान राष्ट्रवादमा बजारीकरण र वैश्वीकरणको प्रभाव स्पष्ट देखापरिरहेको छ । पूँजीवादले हाम्रो समाज र शिक्षालाई पूर्णरूपेण प्रभावित गरेको छ भन्ने पनि होइन । हुन सक्छ शिक्षकहरूले आप्mनो पहिचान पारम्परिक माड्सापजस्तो बनाउन खोजेका होलान् वा हुन सक्छ आपूmलाई जागीरे वा एउटा यस्तो व्यक्ति बुझेका छन् जो पूँजीवादी व्यवस्थाको लागि उपयुक्त सिपाही तयार गर्न सक्षम छ वा के पनि हुन सक्छ भने सशक्त नागरिक तयार गर्ने माध्यम बुझेको हुन् । शिक्षक आपूm र आप्mनो पेशाबारे के सोच्छन् वा विद्यार्थी आप्mनो भविष्यबारे के सोच्छन् ? यी सबैमा पूँजीवादको धेरै योगदान छ । हुन सक्छ विद्यालय र शिक्षकको कामले यस्तो समाज वा राष्ट्रको निर्माण होस् जुन पूँजीवादी नै होस् । तर यो अ
समाज रुपान्तरणले विकास
रूपान्तरण भनेको साबिक रूप वा स्थितिबाट फरक हुनु हो । यस अर्थमा समाज रूपान्तरणबाट अवस्था कि झन् बिग्रन्छ वा सप्रन्छ । तर व्यावहारिक अर्थ, रूपान्तरण राम्रो हुनु सोद्देश्य रहेकोले आज समाज जुन अवस्थामा छ, त्योभन्दा राम्रो बन्नु हो, नराम्रो बन्नु होइन । प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबू राउतले रौतहटमा समाज रूपान्तरण नभए विकास सम्भव नहुने बताएका छन् । समाज रूपान्तरण हुनु भनेको नयाँ र प्रगतिशील विचार, अवधारणाहरूलाई समाजले अङ्गीकार गरेर, पुराना–थोत्रा मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जलि दिएर परिवर्तनकारी सोचका साथ अग्रगामी पाइला चाल्नु हो । आज देशमा खासगरी प्रदेश नं २ मा, यावत् किसिमका कुप्रथा, विकृत संस्कार, रुग्ण मानसिकता व्याप्त छ । दाइजो, बालविवाह, चेलीबेटीलाई शिक्षा नदिने, जातीय भेदभाव, शोषण, सामन्तवाद, आर्थिक पछौटेपन, समूहगत स्वार्थ, पेशागत बेइमानीलगायत मानवीय सबै दुर्गुण व्याप्त छ । हामीले समाजलाई चाहिने न संस्कृति जोगाउन सकेका छौं, न स्वास्थ्यबारे समयसापेक्ष्F सजग छौं । जसरी किसानले उत्पादन गरेको अन्न राख्न भकारी छैन, दिनभरिको लागि पानी राख्ने घैटोजस्ता सामल छैन भने साधनको पर्याप्तत
२०७५ पुस १५ गते आइतवारको प्रतीक दैनिक
संविधान सशोधन हुन्छ –उपेन्द्र यादव
प्रस, वीरगंज, १४ पुस/ उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले मधेसको समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधनको विकल्प नभएको बताएका छन् । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री यादवले संविधान संशोधन गर्ने सहमतिपछि फोरम नेपाल सरकारमा गएको र अहिले सरकार संविधान संशोधनको बाटोमा अगाडि बढेको बताए । उनले शुक्रवारबाट शुरु भएको सङ्घीय संसद्ले संविधान संशोधन गर्नेमा आपूm आशावादी रहेको बताए । वीरगंज नगर सभागृहमा शनिवार आयोजित श्रीनिधि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ७औं वार्षिक साधारणसभामा उपप्रधानमन्त्री यादवले सहकारी र सङ्घीयतालाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढेका मुलुक विकसित भइसकेको चर्चा गरे । उनले नेपालमा वर्षौंदेखि सत्तासीन राजनीतिक दलले सहकारीलाई स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गरेको कारण सहकारीबाट समृद्धिको यात्रा मुलुकले तय गर्न नसकेको गुनासो गरे । मन्त्री यादवले वीरगंजको नारायणी अस्पताल क्षेत्रीयस्तरको नभई राष्ट्रियस्तरकै सुविधासम्पन्न अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताउँदै त्यसको नीतिगत निर्णय लिने काम मात्र बाँकी रहेको बताए । स्वदेशमै
प्रदेश कानूनी सहायता कार्यालय उद्घाटन, निश्शुल्क कानूनी सहायता लिन मुख्यमन्त्री गद्दीको आह्वान
प्रस, वीरगंज, १४ पुस/ प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीले अन्यायमा परेका गरीब, दलित, मुस्लिम, महिलालगायतलाई प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको प्रदेश कानूनी सहायता कार्यालयबाट निश्शुल्क कानूनी सेवा लिन आह्वान गरेका छन् । पर्सा जिल्ला अदालतअगाडि प्रदेश कानूनी सहायता कार्यालयको शनिवार उद्घाटन गर्दै उनले न्यायमा पहुँच नभएका तथा न्याय पाउन नसकेका वर्गको लागि कानूनी सहायता कक्ष स्थापना गरेको जानकारी गराए । मुख्यमन्त्री गद्दीले मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयको मातहत रहने प्रदेश कानूनी सहायता कार्यालयले आठवटै जिल्लाबाट सेवा दिने जानकारी गराए । उनले आठवटै जिल्लाको लागि प्रदेश कानूनी सहायता अधिकृत नियुक्त भइसकेको बताए । कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाको पनि सहभागिता थियो । समाज रूपान्तरण नभए सम्म प्रदेशको विकास सम्भव छैन प्रस, रौतहट/ प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीले समाज रूपान्तरण नभएसम्म प्रदेशको विकास सम्भव भएको बताएका छन् । रौतहट जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नको लागि सोचमा परिवर्तन गराउन प्र
पुनर्निर्माणमा उपेक्षा किन ?
ओमप्रकाश खनाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट भग्नावशेषमा परिणत भएको काठमाडौंको सुनधारास्थित धरहरा पुनर्निर्माणको हालै शिलान्यास गरेको खबर सञ्चारमाध्यममा आए । एक वर्षअघि भूकम्पको स्मृतिमा त्यसै ठाउँमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ भन्दै क्षतिको पुनर्निर्माणमा जुट्न आह्वान गरेका थिए । भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति नसमाते पनि यो प्राकृतिक विपत्तिले नेपालको राजनीतिक गतिलाई भने चामत्कारिक दिशा प्रदान गरेकोमा द्विविधा छैन । प्रकारान्तरले त्यो प्राकृतिक विपत्को धक्काले आआप्mनो स्वार्थमा चारतिर फर्किएको राजनीतिलाई संविधान निर्माणमार्पmत् राजनीतिक सङ्क्रमणको निकासका निम्ति एक ठाउँमा उभिन बाध्य बनाइदिएको थियो । तर जुन गति राजनीतिक र सत्ता सहमतिमा प्राप्त भयो, भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माण अभैm प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पुनर्निर्माणको गतिले पीडितको पीडामाथि न्याय गर्न सकेको छैन । भूकम्पलगत्तै विपत्तिको व्यवस्थापन, क्षति न्यूनीकरणका उपाय र पुनर्निर्माणका प्रतिबद्धतामा द्रुत सक्रियता देख्न पाइएको थिय
मनुष्य जीवनका केही दोष
४. जगत्मा कोही राम्रFे छँदैछैन– दोष हेर्दाहेर्दै मनुष्यको यस प्रकार आँखा बन्न पुग्छ कि दोषबिना नै उसले अन्य व्यक्तिमा दोष देख्न थाल्छ । जस्तो कि हरियो चश्मा लगाएपछि सबै हरियो देखिन्छ । त्यतिबेला कोही राम्रFे देख्दैन । महापुरुष र भगवान्मा पनि उसले दोष देख्छ । उसले निश्चय गर्छ कि जगत्मा कोही भलो छैन अतएव ऊ स्वयम् पनि भलो रहन सक्दैन । दिनरात दोषदर्शन र दोषचिन्तन गर्दागर्दै ऊ बाहिर र भित्रबाट दोषको भण्डार बन्न पुग्छ । ५. मानिसले मलाई राम्रFे सम्झियोस्– यस्तो भावना भएको मनुष्यमा दम्भको प्रधानता हुन्छ । ऊ राम्रFे बन्न चाहँदैन, आपूmलाई राम्रFे देखाउन चाहन्छ । जगत्लाई ठग्न खोज्दा आपैंm ठगिन्छ । उसको जीवनबाट सत्यता जान्छ । मानिस जुन प्रकारको भेष एवं भाषाबाट प्रसन्न हुन्छ, ऊ त्यसै प्रकारको भेष धारण गरेर त्यस्तै भाषा बोल्न थाल्छ । उसको मनमा न गेरुआसँग र न नामजपसँग, तर राम्रFे कहलाउनको लागि ऊ गेरुआ धारण गर्छ र माला पनि जप्न थाल्छ । यस्तो गर्छ कि अरूको सामुन्ने नै, जहाँ उसले वाहवाही पाओस् र यदि त्यसको विरोध गर्दा मानिसले भलो सम्झिन्छ भने उसले त्यसको पनि विरोध गर्न थाल्छ । यसको प्रत्येक कार्
२०७५ पुस १४ गते शनिवारको प्रतीक दैनिक
देवकोटा अध्ययनमण्डल तथा पुस्तकालय भवन शिलान्यास, शिक्षाबिना समाजको विकास असम्भव –मुख्यमन्त्री गद्दी
प्रस, वीरगंज, १३ पुस/ वीरगंज–११ स्थित नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ मावि श्रीपुरको परिसरमा ‘प्रदेशस्तरीय देवकोटा अध्ययनमण्डल तथा पुस्तकालय भवनको शिलान्यास शुक्रवार सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीले अध्ययनमण्डल तथा पुस्तकालय भवनको शिलान्यास गरेका हुन् । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गद्दीले शिक्षाबिना समाजको विकास एवं उत्थान सम्भव छैन भन्दै अध्ययनमण्डल तथा पुस्तकालयले समाजलाई शिक्षित र चेतनशील बनाउन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनले प्रदेशस्तरीय अध्ययनमण्डल तथा पुस्तकालय भवन निर्माण हुने बताउँदै भवन निर्माणका लागि तत्काल ५० लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले दिने घोषणा गरे । आधुनिक भवन निर्माण र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट प्रदेश सरकारले क्रमशः उपलब्ध गराउँदै जाने मुख्यमन्त्री गद्दीले बताए । महिला समुदायको उत्थानको लागि शिक्षालगायत विविध क्षेत्रमा महŒवपूर्ण कार्यक्रम ल्याएको चर्चा गर्दै उनले आगामी माघ १ गतेदेखि छोरी जन्मेलगत्तै प्रदेश सरकारले एक लाख रुपैयाँको बिमा गरिदिने घोषणा पनि गरे । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने हरेक रोजगार तथा
नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धमा प्रयोग भएको हतियार २०४ वर्षपछि फेला
प्रस, गरुडा, १३ पुस/ रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाको समनपुरमा सन् १८१४–१६ को नेपाल– अङ्ग्रेज युद्धमा प्रयोग गरिएको हतियार फेला परेको छ । नेपाल र अङ्ग्रेजबीच युद्ध भएर नेपाली पक्ष शानदाररूपमा विजयी भई नेपाली पक्षले अङ्ग्रेजहरूबाट अनेक हतियार प्राप्त गरेको थियो । अङ्ग्रेजहरूबाट प्राप्त भएका हतियारहरू स्थानीयले एउटा पोखरीमा फालेका थिए । पोखरीबाट आप्mनो ससुराको हजुरबाले तरबार प्राप्त गरेको ९९ वर्षकी पिरितियादेवी राउतले बताइन् । नेपाली सेनाको गौरमा रहेको इन्द्र बक्स गणका कर्णेल सुजन शाक्यले प्रथम विश्वयुद्धताका पनि यस्तै हतियारको प्रयोग गरिएकोले नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धको समयको हतियार भएको स्पष्ट पारेका छन् । पिरितियादेवी राउतको घरको अगाडि रहेको ऐतिहासिक पोखरीबाट ससुराका हजुरबाले यस्ता अन्य साना हतियारहरू पनि पोखरीबाटै फेला पारेको तर समयक्रममा बिस्तारै जम्मै हराउँदै गएको बताइन् । पिरितियादेवी राउतले करिब २०४ वर्ष पहिलेको हतियार उपलब्ध गराइदिएकोमा गढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख श्यामप्रसाद यादवले पुरस्कारस्वरूप तत्काल दुई हजार रुपैयाँ प्रदान गरे । साथै प्रमुख यादवले नगरपालिकाको तर्पmबाट सम्म
ठोरी नाकाको पर्यटन विकासका लागि महोत्सव शुरु
प्रस, ठोरी, १३ पुस/ वीरगंज नाकाको विकल्पका रूपमा स्थापित हुँदै गएको पर्साको ठोरी क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले शुक्रवारदेखि प्रथम ठोरी महोत्सव शुरु भएको छ । भारतीय पर्यटकहरूको गन्तव्यका रूपमा रहेको ठोरीमा शुक्रवारदेखि ११ दिने ठोरी महोत्सवको आयोजना गरिएको हो । भारतीय सीमा नाकासँगै जोडिएको ठोरीको राईधाराको खुल्ला चौरमा आयोजित महोत्सवको उद्घाटन कृषि तथा पशुपक्षी राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले गरेकी हुन् । ठोरी गाउँपालिका कार्यालयको सहयोगमा आयोजित ठोरी महोत्सव पुस २३ गतेसम्म चल्नेछ । “कृषि, पर्यटन र व्यापारबाट समृद्धिको खाका कोरी, पुस १३ देखि २३ गतेसम्म जाऔं है ठोरी” मुख्य नाराका साथ आयोजित महोत्सवमा कृषि प्रदर्शनी, खानानास्ताका होटल, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अटोमोबाइल, आइटी, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक सामग्री, गार्मेन्ट, जुत्ता तथा चप्पल, निर्माण सामग्री, हस्तकलाका सामग्री, रेडिमेड कपडा, चिल्ड्रेन फन पार्क गरी एक सय ५० भन्दा बढी स्टल राखिएका छन् । महोत्सव अवधिभर राष्ट्रिय, स्थानीय तथा भारतीय गरी दुई दर्जन कलाकारहरूको मनोरञ्जनात्मक साङ्गीतिक प्रस्त
सिजी कपको फाइनलमा डिपिएस
प्रस, परवानीपुर, १३ पुस/ दिल्ली पब्लिक स्कूल वीरगंजद्वारा आयोजित छैटौं सिजी कपको पुस १६ गते हुने फाइनलमा आयोजक विद्यालय डिपिएस प्रवेश गरेको छ । शुक्रवार भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा डिपिएसले एक्स सर्मिसमेन स्कूल बारालाई टाइब्रेकरमा २ गोलका विरुद्ध ४ गोल गरी पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएको हो । निर्धारित समयमा दुवै विद्यालयबाट १–१ गोलको बराबरी भएपछि खेल टाइब्रेकरसम्म पुगेको हो । सो खेलमा डिपिएसका साहेबबाबू मन्सुर म्यान अफ दि म्याच घोषित भए । भोलिको दोस्रो सेमिफाइनल खेल लोट्स एकेडेमी सिमरा र एसओएस चितवनबीच हुने विद्यालयले जनाएको छ ।
उमाशङ्कर द्विवेदी यसै बेला दुःशासन महाबली नकुलसित भिडिहाल्यो र दुर्मुख सहदेवमाथि जाइलाग्यो र बाणको वर्षा गरेर व्यथित पार्न थाल्यो । अनि सहदेवले एउटा बडो तीखो बाण हानेर उनको सारथिलाई मारिहाले । अनि ती दुवै वीरहरू एकार्कामाथि भीषण बाण वर्षा गर्दै पीडित पार्न थाले । स्वयम् महाराज युधिष्ठिर शल्यसामु आए । मद्रराज शल्यले उनको धनुषलाई दुई टुक्रा पारिदिए । धर्मराजले छिट्टै अर्को धनुष लिएर मद्रराजलाई बाणहरूले आच्छादित पारिदिए । धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्यको सामु आए । द्रोणाचार्य कुपित भएर उनको धनुषलाई तीन टुक्रा पारिदिए तथा एक कालदण्ड समान बडो भीषण बाण हाने, जुन उनको शरीरभित्र छि¥यो । अनि धृष्टद्युम्नले अर्को बाण लिएर चौदह बाण हानेर द्रोणाचार्यजीलाई विधिहाले । यस प्रकारले ती दुवै वीरहरू क्रोधमा भरिएर बडो तुमुल युद्ध गर्न थाले । शङ्खले बडो वेगले सोमदत्तको पुत्र भूरिश्रवामाथि धावा गरेर ‘थाम..थाम..’ भन्दै हाँक दिन थाले । अनि उनले उनको दाहिने पाखुरा खड्गले चुडालिदिए अनि भूरिश्रवाले शङ्खको गलाको हाड र काँधको बीचको हाडमाथि प्रहार गरे । यस प्रकार ती रणोन्मत्त वीरहरूबीच भीषण युद्ध हुन थाल्यो । र
मुकुन्द आचार्य अचेल सकारात्मक सोचको नयाँ फेसन चलेको छ । ‘पोजिटिभ थिंकिङ्’ भनेपछि युवादेखि बूढाखाडासम्म अचेल हुरुक्कै हुन्छन् । भुतुक्कै हुन्छन् । अचेलको नयाँ फेसनको पारामा भन्ने हो भने ‘भाइरल’ भॉछ– यो सकारात्मक सोच । सबै आप्mनो वर्तमान स्थितिबाट सन्तुष्ट छैनन् । मलाई पनि बेला न कुबेला रनक्क झोंक चल्छस सुनामी आए जस्तो १ भैंचालो आएजस्तो गरी । मेरो झोंकको विशिष्टता के छ भने चलेपछि...चल्यो...चल्यो १११ सितिमिति बस्नै मान्दैन । यस्तै सुनामीको झोंक चल्या बेलाको घटना सम्झन्छु। एक दिन सकारात्मक सोचमा दिन बिताउने झोंक चलि त हाल्यो । यस्तैमा वीरगंज नगरीमा जताततै फोहरको डुङ्गुर देखियो । अरू दिन कस्तो फोहर भनेर आपैंm तर्केर हिंड्थें । तर आज म त्यसरी सजिलैसित उम्कन सकिनँ । पोजिटिभ थिंकिङ्ले मलाई भन्यो– खाली निगेटिभ सोचेर हुन्न । पोजिटिभ थिंकिङ्को चश्मा भिरेर हेर त १ यो फोहरको थुप्रो यहाँ मात्रै छ र ? शहरभरिमा यस्तो डुङ्गुर सयौं ठाउँमा होला । गनेरै हेर्ने हो भने पनि हजार ठाउँमा यस्ता ससाना पहाड (फोहरका) सुशोभित होलान् । यी यस्ता उपकारी डङ्गुर हुन्, जहाँ कुकुर, काग, गाई सपरिवार आएर आ
दान देना मना है
सञ्जय मित्र एउटा ठाउँमा यही लेखिएको पाइयो । अन्यत्र जाँदा सबैतिर दानलाई पुण्य भनिएको पाइन्छ तर यस ठाउँमा भने यस्तो लेखेको पाइयो । देख्नेबित्तिकै अचम्म लाग्नु स्वाभाविक हो । अझ कतिपय ठाउँमा यस प्रकारका कुराहरू लुकाएर लेखिएको हुन्छ कि सम्बन्धित व्यक्तिले देख्नै पाउँदैन । बिमा कम्पनीले जीवन बिमा गर्दा बिमितसित सोभैm सही गराउँछन् । मसिनो अक्षरमा लेखिएका शर्तहरू पढ्न दिंदैनन् वा नपढेकालाई पढेर सुनाउँदैनन्, बुझाउँदैनन्, के भन्न खोजेको हो भने । तर मुख्य सडकसँगै जोडिएको र मुख्य प्रवेशद्वारमैं हिन्दी भाषामा ‘दान दिन मनाही छ’ लेखिएको देखेपछि एकछिन त सोच्न जो पनि बाध्य हुनुपर्छ । अझ धार्मिकस्थलमा । प्रसिद्ध धार्मिकस्थलमा यसो लेखिनु आपैंmमा आश्चर्यजनक त हुँदै हो । त्यहाँका केही मानिसलाई सोधें पनि । खासमा थाहा नभएको जवाफ आयो । हुनत सर्वसाधारणलाई सामान्यतया गहिरा कुराको जानकारी हुँदैन र गहिरा कुरा गर्नेहरू सामान्यतया सडकछेउ भेटिंदा पनि भेटिंदैनन् । भगवान् गौतम बुद्धले आप्mनो अन्तिम सास वायुमण्डलमा मिलाएको ठाउँ कुशीनगरमा लेखिएको बोर्ड हो यो । सम्भवतः केही वर्ष पहिले अन्य तीर्थस्थलमा जस्त
जगदीश शर्मा दर्शन गरिसकेर, कसैले नरिवल फोडे, कसैले दर्शनीय मन्दिरको वरिपरि घुम्दै आनन्द लिए । शक्तिपीठमा बलि चढाउने परम्परा हामीकहाँ त प्रशस्त देखिन्छ, त्यहाँ देखिएन । सामान्य सोधपूछ गर्दा कसैले बताएन पनि । तर कामाख्यामा पनि बलि चढ्दो रहेछ । भक्तहरू देवी दर्शनका लागि आउनुपूर्व बोकाको बलि चढाइँदो रहेछ । यो कुरा प्रायः मानिसलाई पत्तो दिइँदैन । हामी समूह–समूहमा विभाजित भएर फोटो खिच्न थाल्यौं । केही सट मैले पनि लिएँ । तर मलाई यता भारत गएताका जहिले पनि मोबाइलले धोखा दिने वा आफैं जान्ने नभएर वा हुस्सु भएर हो, धित मरुन्जेल फोटो खिच्नै पाएको होइन । यसपालि त रिचार्ज कार्ड लग्न बिर्सेर यस्तो भएको थियो । रक्सौलमा रेल चढेपछि पो थाहा भयो, रिचार्ज बिर्सिएको रहेछ । फेरि मेरो आइफोन । हतपति कसैसँग नहुने । त्यसैले ट्रेनमैं अफ गरेको मोबाइल, मात्र फोटो लिनका लागि खोल्थें । ती फोटोमध्ये पनि धेरै त बैंकक जाँदा मिल्काउनुपरेको थियो । त्यो कथा कहिल्यै थाइल्यान्ड भ्रमणको लेखमा जोडिएला । मन्दिर, लजमा दुईचार सट र ब्रह्मपुत्र नदीमा नौका विहार गर्दा दुईचार सटबाहेक भैरवस्थानको फोटो खिच्नेसम्म ब्याट्री रहेन ।
माल पाएर के गर्नु चाल पाए पो
वैद्यनाथ ठाकुर यही पुस १० गते ओमेन्स स्कील सेन्टरको आयोजनामा वीरगंज–३ भगवतीटोलस्थित पार्कमा खाना महोत्सव सम्पन्न भएको थियो । झन्डै दुई दर्जन जति खानपिनका मौलिक परिकार भएको उक्त महोत्सवमा पुसको जाडोमा महानगरवासीहरूको राम्रै सहभागिता थियो । पार्कभित्र यो नै पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रम भएको हुनुपर्छ । कार्यक्रम सफल पार्न आयोजक पूरै सफल थियो । पार्कभित्र घुम्दै गर्दा पार्कको क्षेत्रफल हेर्दा जोकोहीले पनि एकचोटि भारी मनले भन्नैपर्छ किन साँघुरिएको पार्कको भौतिक अवस्था अत्यन्तै साँघुरिएको छ । लगभग ११–१२ कट्ठामा रहेको उक्त पार्क कस्तो आकारको छ भन्दा यसको सही उत्तर हुन्छ विचित्र आकारको । कुनै पनि ठाउँ एकनासको देखिएन । कतै पनि एउटा आकार छैन । यसबारे जिज्ञासा राख्दा बल्ल थाहा पाइयो । पार्कमा भ्रष्टाचारको भाइरस लागेर पार्कको त्यो गम्भीर अवस्था भएको रहेछ । कुनै समयमा साढे पाँच बिघामा त्यहाँ सार्वजनिक पोखरी थियो । पछि वरिपरिका व्यक्तिले पोखरी अतिक्रमण गर्न थालेपछि यतिबेला पार्क ११–१२ कट्ठामा समेटिएको हो । मानिसको प्रवृत्ति नै हुन्छ– ‘मै खाउँ मै लाउँ सुखसयल मै गरूँ ।’ तर यसको लागि अरूले जति द
वीरगंज महानगरपालिका कार्यालयको पुस ५ गते महानगरमा रहेका आठ विद्यालयका प्रधानाध्यापकको सरुवालाई लिएर महानगरमा विद्यार्थीहरूले बितण्डा मच्चाउँदै आएका छन् । सरुवाको विरोधमा माईस्थान विद्यापीठका विद्यार्थीहरू अभैm मैदानमैं छन् । उनीहरू स्वतपूmर्त आन्दोलित भएका हुन् भन्ने कुरा पत्याउन सकिन्न । नियम कानूनले हुने सरुवा बढुवा सामान्य प्रक्रिया हो । वीरगंज महानगरपालिकाले आठजना प्रअको सरुवा गर्दा नियम कानूनलाई तिलाञ्जलि दिएको देखिन्छ । त्यसैले सरुवा भएका प्रअको उक्साहटमा विद्यार्थीहरू मैदानमा उत्रिए, उतारिने काम भयो । माईस्थान विद्यापीठका प्रअ विनोद मेहताले आप्mनो सरुवाविरुद्ध खुलेर विरोध गरेका छन् । उनको विरोधमा केही सत्यता देखिन्छ । माईस्थान विद्यापीठ सामुदायिक विद्यालय हो तर पछिल्ला केही वर्षमा सो विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन शुरु भएपछि विद्यालयले प्रगति गरेको कसैबाट लुकेको पनि छैन । निजी विद्यालयहरूको प्रतिस्पर्धामा माईस्थान विद्यापीठ देखा परेको छ । मध्यमवर्गीय परिवारले धान्न सक्ने शुल्कबाट सो विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको कारण पछिल्लो समयमा विद्यालयको शैक्षिकस्तर
२०७५ पुस १३ गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक
गाउँ, नगरपालिकाले विकासको कामलाई गति दिन सकेन
प्रस, सेढवा, १२ पुस/ ढिलो–चाँडो पर्सा जिल्लाका सबै स्थानीय तहले दोस्रो गाउँसभा, नगरसभा गरेपनि विकासको कामलाई गति दिन सकेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्षको ६ महीना बित्न लाग्दा पनि विभिन्न कारणवश विकास निर्माण कार्य शुरू हुन सकेको छैन । जीराभवानी गापाका प्राविधिक इन्जिनियर विजय थारूले विकास निर्माणको कामको लागि समय बित्दै गएको बताए । उनले गुणस्तरीय कामको लागि समयमा शुरू गर्नुपर्ने अहिले ढिला भइरहेको स्विकारेका छन् । एकैपटक सबैखाले विकास निर्माण गर्दा जनशक्तिको अभावले अनुगमन फितलो हुने र गुणस्तरीय कामको सम्भावना न्यून रहने उनले बताए । वडाबाट योजनाहरू तर्जुमा भएर नआउँदा पनि कतिपय गापामा विकास निर्माणको काम शुरू हुन सकेको छैन । इ. थारूले गापाको कार्यालयलाई विकास निर्माणको काम छिट्टै शुरू गर्न आपूmले सुझाव दिएको बताए । चालू आवको साढे पाँच महीनामा ठेक्काबाट गर्ने काम अझ बढी प्रभावित हुने सम्भावना छ । ३५ दिन सूचना जारी गर्नुपर्ने हुँदा टेन्डरबाट हुने काम समयमा सकिन कठिनाई हुने उनको भनाइ छ । पटेर्वासुगौली गापाका प्रशासकीय अधिकृत सरोज चौधरीले जीराभवानी र पटेर्वासुगौलीबीच रहेको भल
अनिश्चितकालीन बजार बन्द
प्रस, रौतहट १२ पुस/ रौतहट उद्योग वाणिज्य सङ्घले अनिश्चितकालीन बजार बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । रौतहट उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पडितप्रसाद जयसवालको सक्रियतामा विभिन्न माग राख्दै अनिश्चितकालीन बजार बन्दको घोषणा गरिएको हो । पान भ्याटमा दर्ता रहेको फर्मले नेपाल भरी स्वतन्त्ररूपले व्यापार गर्ने प्रावधान रहेकोमा कायम गर्नुपर्ने, वर्षैपिच्छे कर तिरेको व्यापारीलाई दुःख दिने कार्य अविलम्ब बन्द गर्नुपर्ने, बिल–बिजक हुँदा पनि बल–जबरजस्ती माल–समान समाती धम्कयाउने कार्य गर्ने प्रहरीलाई अविलम्ब कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, निश्शर्त गाडीसहितको मालसामान फिर्ता गर्नुपर्ने, व्यावसायिक वातावरण बनाउन दुवै पक्षबाट लिखित सम्झौता हुनुपर्ने माग सहित बिहीवार गौर बजार बन्द भएको छ । गौर नगरपालिका–५ मा रहेको फर्म पुष्पा टे«डर्सबाट खाद्यान्न सामग्री खरीद गरी ईशनाथ नगरपालिका–४ मठियामा दर्ता रहेको फर्म नवल स्टोर्सले लैजाने क्रममा औरैया प्रहरी चौकी अगाडि प्रहरीले मालसामानसहित ट्याक्टर समाती व्यापारीलाई दुःख दिनुका साथै व्यापार गर्ने वातावरणमा असर पर्ने भएकोले बजार बन्द गराइएको सङ्घका अध्यक्ष ज
जेलको बच्चालाई न्यानो कपडा र खानेकुरा सहयोग
प्रस, परवानीपुर, १२ पुस/ वीरगंज कारागारका चारजना बालबालिका लुगा–कपडा र खानेकुराको अभावमा समस्या भोगेको समाचार सञ्चारमध्यममा आएपछि कोशिश फाउन्डेशनले सहयोग गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष मदन गुप्ताको सक्रियतामा वीरगंजका सामाजिक अभियन्ता प्रकाश थारूको समूह आज कारागार पुगी ती बालबालिकालाई जुत्ता मोजा, स्वेटर, पन्जा, टोपीलगायत न्यानो कपडा र खानेकुरा सहयोग गरिएको हो । कारागारमा कैदीबन्दीकै साथ रहेका आरबबन्ठा थारू, जावेद खान, गुलनाज खातुन, आहिल हुसेनका आमाहरूलाई सामान हस्तानान्तरण गरिएको थियो । सो अवसरमा प्रकृति सेवा प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंहलगायतको सहभागिता थियो ।
सिजी कपः सेमिफाइनलमा डिपिएस, सर्भिसमेन, लोटस र एसओएस
प्रस, परवानीपुर, १२ पुस/ दिल्ली पब्लिक स्कूल, वीरगंजद्वारा आयोजित छैठौं सिजी कप पूmटबल प्रतियोगिताको शुक्रवारदेखि शुरू हुने सेमिफाइनलका लागि चारवटा टिम छनोट भएका छन् । पुस १३ गते हुने पहिलो सेमिफाइनलको लागि डिपिएस र एक्स सर्भिसमेन स्कूल बारा छनोट भएका छन् भने पुस १४ गते हुने दोस्रो सेमिफाइनलको लागि लोटक एकेडेमी वीरगंज र एसओएस चितवन छनोट भएको विद्यालयका लेखापाल शिवशङ्कर कुशवाहाले बताए । उनका अनुसार यस अघि भएको क्वाटर फाइनल चरणबाट डिपिएस र सर्भिसमेन सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका थिए भने आज भएको क्वाटरफाइनलको अन्तिम खेलमा एसओएसले राष्ट्रिय विभूति विद्यालय बारालाई पेनाल्टीमा ३ गोलको विरुद्ध ४ गोल गरी पराजित गरेपछि सेमिफाइनल दौडमा एसओएस प्रवेश गरेको हो । आजको अन्तिम क्वाटरफाइनल खेलका म्यान अफ द म्याच एसओएसका चिरञ्जीवी श्रेष्ठ घोषित भए । पर्सा, बारा, मकवानपुर र चितवनको १४ वटा बोर्डिङ्ग स्कूलको टिमको यस प्रतियोगितामा सहभागिता रहेको छ ।
शीतल महतो विश्वकै बृहत् प्रजातान्त्रिक छिमेकी मुलुक भारत र साम्यवादी सिद्धान्त अँगालेको अर्को छिमेकी मुलुक चीनको आर्थिक प्रगति विश्वकै लागि उदाहरण बनेको छ । यी दुवै छिमेकी मुलुकले सन् २०२० मा विश्वकै पहिलो तथा तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र बन्ने दौडमा लागेका छन् । तर यी दुई ठूला र समृद्ध छिमेकी मुलुकबीच रहेरपनि प्राकृतिक स्रोत साधनले अत्यन्त धनी देश नेपाल झन्झन् गरिब बन्दै गएको छ । यसको प्रमुख कारण मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नै हो भन्दा अयुक्ति नहोला । सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज स्थापना गर्न मुलुकमा प्रजातन्त्रको प्राप्ति, पुनस्र्थापना र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि अथक योद्धाको रूपमा सङ्घर्ष गरेका आम नेपाली नागरिकका लागि त्यसपछिका समय सुखद बन्न सकेन । त्यो समय केही नेता र तिनका सन्तान एवं नातागोताका लागि मात्र सुखद बन्यो । बहुलवादी राज्यप्रणाली भएका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, जमघट गर्न पाउने, सङ्गठन खोल्न पाउने, आवतजावत र बसोवास गर्न पाउने तथा कुनै पनि पेशा अँगाल्न पाउने स्वतन्त्रता त उनीहरूले पाए तर सबै नागरिक सम्पन्न, समृद्ध र विकसित जीवन जिउन पाउने अ